सांसद बन्ने योजनाबाट पछि हटे वामदेव, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
सांसद बन्ने योजनाबाट पछि हटे वामदेव
काठमाडौं। उनले बिहीबार स्थानीय नेताहरूलाई अब आफू तत्कालका लागि सांसद बन्ने योजनाबाट पछि हटेको सन्देश पठाएका छन् । स्थानीय जनमत र पार्टीभित्रको अवस्थालगायतको कारण देखाउँदै उनले तत्काल सांसद बन्ने दिशामा नलाग्ने उल्लेख गरेको स्थानीय नेताले जानकारी दिए । ‘अहिलेको परिस्थिति र प्रतिक्रिया सुन्दा निर्वाचनमा सहभागी हुनेजस्तो वातावरण देखिएन,’ गौतमको भनाइ उद्धृत गर्दै काठमाडौं ७ का ती नेताले भने ।
गौतमको चर्चा चलेपछि पार्टीले स्थानीय वस्तुस्थितिको समेत आकलन भयो । स्थानीय नेताहरू नै विपक्षमा उभिएपछि गौतमका लागि अवस्था प्रतिकूल बन्यो । पार्टी केन्द्रमा पनि गौतमको विषय विवादित बनेको छ । नेताहरू ईश्वर पोखरेल, भीम रावलमात्र होइन, गौतमसँग निकट मानिएका महासचिव विष्णु पौडेलसमेत यो निर्णयमा सन्तुष्ट छैनन् । पौडेलले बिहीबार सार्वजनिक रूपमै गौतम अब चुनावमा उठ्न नहुने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभामा प्रवेश गर्नका लागि गौतमले यसअघि झन्डै दर्जनपटक प्रयास गरेका थिए । तर कतै पनि परिस्थिति अनुकूल नभएपछि काठमाडौं ७ का सांसद मानन्धर उनका लागि सहयोगी बन्न खोजे । परिस्थिति उनको विपक्षमा देखापर्‍यो। त्यसैले उनी तत्कालका लागि सांसद बन्ने दिशामा अघि नबढ्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् । गौतम आफैंले भने यो विषयमा प्रतिक्रिया दिन मानेनन् । कान्तिपुर दैनिक